မန္တလေးမြို့တွင် ပိုလန်နိုင်ငံ မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ်များဖြင့် သဘာဝဘေး အချိန်မီတုံ့ပြန်နိုင်?? - Yangon Media Group
ODA ချေးငွေအစီအစဉ်ဖြင့် ပိုလန်နိုင်ငံမှ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနက ဝယ်ယူခဲ့သော မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ်များနှင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်များအနက်မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၌ထားရှိအသုံးပြုမည့်ယာဉ်များ စမ်းသပ် မောင်းနှင်ခြင်းနှင့် သဘာဝဘေး ကိုအချိန်မီတုံ့ပြန်နိုင်ရန် ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်းကို နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက် နံနက် ၆ နာရီကကျင်းပ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”ပိုလန်နိုင်ငံထုတ် မီးငြှိမ်း သတ်ယာဉ်တွေကို ပြည်သူကိုပြ သချင်တဲ့အတွက် ဒီနေ့စမ်းသပ် မောင်းနှင်တာပါ။ မန္တလာသီရိ ဘောလုံးကွင်းမှာလည်း ပိုလန်နိုင်ငံကိုသွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ အရာ ရှိတွေက ပိုလန်မီးသတ်ယာဉ်တွေ အသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်တွေကို ဆင့် ပွားပြန်လည်ပို့ချတာပါ။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာခဲ့ ရင် အချိန်မီတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ ဇာတ် တိုက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်း ပြု လုပ်တာပါ”ဟု မန္တလေးခရိုင် မီးသတ်ဦးစီးမှူးဦးထက်အောင်က ပြောကြားသည်။
မန္တလေးမြို့တွင်ထားရှိမည့် ပိုလန်နိုင်ငံမှမီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ်နှင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်ငါးစီး ကို မန္တလေးမြို့တွင်းရှိ လမ်းများ၊ တံတားများ ဝင်ထွက်သွားလာရာ တွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး အတွက် ဗဟိုမီးသတ်စခန်းမှ မဟာမုနိဘုရားကြီး၊ ထိုမှ မန္တလေး ဘိုးဘိုးကြီးနတ်နန်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့် မန္တလေးမြို့တွင်းပတ်၍ မန္တလာသီ ရိအားကစားကွင်းအတွင်း မီးဘေး အန္တရာယ်ငြှိမ်းသတ်ရေးနှင့် သဘာ ဝဘေးအန္တရာယ်များကျရောက် လာပါက အချိန်မီတုံ့ပြန်နိုင်ရန် ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြု လုပ်ခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိတွင် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မီးသတ်ဦးစီးဌာန၌အ သုံးပြုရန် မီးငြှိမ်းသတ်ရေးနှင့်ရှာ ဖွေကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်ခြောက်စီး ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ထို့အပြင် မန္တလေး ခရိုင်တွင်ငါးစီးနှင့် မိတ္ထီလာခရိုင် တွင်တစ်စီးထားရှိကြောင်း သိရ သည်။
‘ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တွေကို ရှိန်တာမျိုး၊ လန့်တာမျိုးကြောင့် အိုက်တင်မလိုက်နိုင်တာမျိုးတွေလ??
စလင်းမြို့နယ်တွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေ ဝင်ရောက်မှုကြောင့် အခြေခံပညာကျောင်း ၁၃ ကျောင်း ယာယီ ပိတ်ထား
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်များကို စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုဖြင့် တာဝန်ယူမည်